Melon iche | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Melon iche
Melon bụ onye nnọchianya nke omenala egusi, otu ụdị nke Gherkin. Achịcha ndị a dị oké ọnụ ahịa maka nnukwu uto dị ụtọ nke na ọbụna nwatakịrị nke kachasị ngwa ngwa nke na-achọghị ịmị mkpụrụ ga-amasị ya. Na mgbakwunye na shuga, melon pulp nwere vitamin A, C na P, yana ascorbic acid, salts nke ígwè, sodium, potassium, na fiber.
Nke kachasị mma nke Ukraine melons
Melon bụ ihe na-esi na melon nke Central na obere Asia, nke na-eto eto na Ukraine karịsịa na ndịda. Mkpụrụ nke egusi bụ ugu, a na-eji ya egwuri egwu. E nwere ọtụtụ ụdị nke melons nke Ukraine. Anyị ga-agwakwa ọzọ banyere ụfọdụ kachasị mma n'ime ha. Ị ma? Melon na-eme ka akpịrị na-agụsi agụụ ike, bara uru maka ndị mmadụ na-ata ahụhụ site na ọrịa shuga, cholecystitis, oke oke, ọrịa obi.
Na-eto eto melon "Torpedo" na ya onwe ya
Nye ọtụtụ ndị mmadụ, a na-ejikọta oge okpomọkụ na egọn. Site n'enye ọnụ ya, ọ na-enye aka ịtụle nri nri okpomọkụ nke ike gwụrụla ma mee ka ọ bụrụ ihe na-atọ ụtọ ma bara uru. N'agbanyeghị ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ụdị ngwaahịa dị iche iche, ihe kachasị ewu ewu bụ mmanụ aṅụ. N'isiokwu a, ị ga-achọta azịza nke ajụjụ ndị a: otu esi etolite egọn sitere na mkpụrụ osisi ebe melon na-etolite, nakwa ọtụtụ ihe ndị dị omimi banyere ọdịbendị a magburu onwe ya.
Melon "Kolkhoznitsa": kụrụ, nlekọta ma kọwaa mkpụrụ osisi ahụ
Ihe na-esi ísì ụtọ, nke na-esi ísì ụtọ bụ nke kachasị ụtọ na tebụl nri abalị n'oge mbubreyo na n'oge mgbụsị akwụkwọ. A na-eji mkpụrụ osisi pulp ma ọ bụ dị ka mmiri maka salads, ihe ọṅụṅụ mkpụrụ osisi, pastry, wdg. Tụkwasị na nnu ya dị mma, melon nwere ọtụtụ ihe bara uru dị n'ọtụtụ ebe a na-eji ọgwụ na ọdịnala eme ihe.
Ot'u esi eme ka egosiputa ihe di n'ime griinye polycarbonate, nke e guzobere na nhazi
A na-enwe ọganihu dị ukwuu na melons na mba ndị nwere okpomọkụ na-arị elu. Ndị na-elekọta ubi ndị bi na ọnọdụ ihu igwe nke etiti dị n'etiti ga-ewu ụlọ greenhouses na greenhouses maka ihe ubi melons, watermelons, pumpkins. N'agbanyeghị na ọ dị mgbagwoju anya, mgbe ụfọdụ, ọ na-adịrị mfe igbalite mkpụrụ osisi egọn na greenhouses karịa n'ala na-emeghe.